၉.၇.၂၀၁၃ရက်နေ့၁၅၀၀အချိန်ခန့်တွင် ရန်ကုန်အနောက်မူးယစ် (အထူး)အဖွဲ့မှတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ဦးဆောင်သောအဖွဲ့သည် သက်သေများနှင့်အတူ သတင်းအရ ဒဂုံမြို့နယ်၊ အမျိုးသား
ရေကူးကန်ရှိ ကားပါကင်တွင်စောင့်ဆိုင်း၍ စန်းမောင်
(ခ)ချိုင်လောမင်၊(ဘ)ဦးဘိုဝ(ခ)ချိုင်တုံမင်၊ အရှေ့ပြင်ရပ်ကွက်၊ မိတ္ထိလာမြို့နေသူအား ဦးဝိစာရရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့
ခေါ်ဆောင်ရှာဖွေစစ်ဆေးရာ ၎င်းလွယ်ထားသော ကာကီရောင်
IBUPAR တံဆိပ်ပါလိမ္မော်အ၀ါကြား Capsule ဆေးတောင့်
အစေးခဲ၃ပဲ ၁ရွေး၊ (၃.၃)ဂရမ်ခန့်၊ USC စာတမ်းပါ
သစ်သီးဖျော်ရည်ဗူးငယ် အတွင်း၌ အပြာရောင်ကြွပ်ကြွပ်အိတ်ငယ်
အတွင်းထည့်လျက် ဘိန်းဆီခဲဟုယူဆရသည့် အစေးခဲ ၁ကျပ်၆မူးသားခန့်၊(၂၈)ဂရမ် တို့အားရှာဖွေတွေ့ရှိသိမ်းဆည်းရမိ
သောကြောင့် ဒဂုံမြို့မရဲစခန်း မယ(ပ)၃/၂၀၁၃၊ မူး/စိတ် ၁၅/၁၆(ဂ) ဖြင့်အရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း
Glee မင်းသား Cory အား ဟိုတယ်ခန်းတွင် သေဆုံးလျက်တွေ့ရှိရ
အမေရိကန်ရုပ်သံ FOX ၏ Glee ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်သည့် ကနေဒါမင်းသား Cory Monteith သည် ဟိုတယ်ခန်းတစ်ခုတွင် သေဆုံးသွားကြောင်း သိရသည်။
အသက် ၃၁ နှစ်အရွယ် Cory သည် စနေနေ့ (ဇူလိုင် ၁၃ ရက်) နေ့လည်ပိ်ုင်းက ဗင်ကူးဗားရှိ Fairmont Pacific Rim ဟိုတယ်အခန်းတွင် သေဆုံးနေခြင်းဖြစ်သည်။ သေဆုံးရသည့် အကြောင်းရင်း အတိအကျကို ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးဟုဆိုသည်။
Cory သည် ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီလတွင် ပြန်လည် ထူထောင်ရေးစခန်းမှ ပြန်ခွင့်ရခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Cory နှင့် Glee ဇာတ်လမ်းတွဲမှ မင်းသမီးဖြစ်သူ Lea Michele တို့မှာ ချစ်သူများဖြစ်ကြကြောင်း သိရှိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းရှိ ကျွဲ၊ နွားများ ကုန်သလောက်ဖြစ်နေကြောင်း ၀န်ကြီးချုပ်များက တင်ပြ
ဥက္ကံမြို့ နွားပွဲဈေးအတွင်း ရောင်းချပြီးသော နွားများအား တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ-အောင်ရဲကို)
မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းရှိ ကျွဲ၊ နွားများ ကုန်သလောက်ဖြစ်နေကြောင်း ၀န်ကြီးချုပ်များမှ သမ္မတနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် တင်ပြခဲ့သည်ဟု နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးတင်နိုင်သိန်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
ဇူလိုင် ၁၃ ရက်က ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတနိုင်ငံ ကုန်သည်များနင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ်၏ နှစ်ပတ်လည် အသင်းသားစုံညီ အစည်းအဝေးပွဲ၌ ဖွင့်လှစ်ထားသော ပြခန်းများအား လှည့်လည်ကြည့်ရှုစဉ် ယင်းသို့ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးတင်နိုင်သိန်းက "တစ်လောက ၀န်ကြီးချုပ်တွေနဲ့ သမ္မတ တွေ့ဆုံပွဲ လုပ်တဲ့အချိန်မှာ ၀န်ကြီးချုပ်တွေက ဘာတင်ပြသလဲဆိုတော့ သူတို့တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်တွေမှာ ကျွဲ၊ နွားတွေ ကုန်သလောက် ဖြစ်နေပြီလို့ သမ္မတကို တင်ပြခဲ့တယ်" ဟု အသားစားနွား ပြခန်းရှေ့တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
သမ္မတအနေဖြင့် ၀န်ကြီးချုပ်များ၏ တင်ပြမှုအား ပြန်လည်အစားထိုး မွေးမြူမှုများ ပြုလုပ်သွားရန် ညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်း ၀န်ကြီးဦးတင်နိုင်သိန်းက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကျွဲနွားများ ကုန်ဆုံးရန် ရှိနေခြင်းမှာ ကျွဲ၊ နွားများအား ယခုနောက်ပိုင်းတွင် စားသုံးမှု မြင့်တက်လာနေခြင်းနှင့် နိုင်ငံခြားသို့ တင်ပို့မှုများတွင်လည်း တရားမ၀င် လမ်းကြောင်းများမှတစ်ဆင့် တင်ပို့မှုများလည်း ရှိနေခြင်းတို့မှာ အဓိကကျနေပြီး ပြန်လည်မွေးမြူမှု လုပ်ငန်းများတွင်လည်း ကုန်ကျစရိတ် များပြားမှုများကြောင့် မွေးမြူသူများ နည်းပါးသွားကြောင်း ကျွဲ၊ နွားပွဲစားများထံမှ သိရသည်။
ဥက္ကံ နွားပွဲဈေးဝယ်/ရောင်းလုပ်နေသူ ကိုဟန်စိန်က "နွားပြပွဲတွေမှာ အရင်ကလောက် သိပ်မများတော့တာ တွေ့ရတယ်။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ နွားတွေလည်း သိပ်မတွေ့ရတော့ဘူး" ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ကျွဲနွားဈေးကွက်အတွင်း ကျွဲတစ်ကောင်၏ ပေါက်ဈေးမှာ ကျပ်လေးသိန်းမှ ကျပ်ခုနစ်သိန်းထိ ဈေးရှိနေပြီး နွားတစ်ကောင်လျှင် သုံးသိန်းခွဲမှ ကျပ်ခြောက်သိန်းဝန်းကျင်အထိ ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကျွဲနှင့်နွားများအား တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံများသို့ အဓိက တင်ပို့နေပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသို့လည်း တင်ပို့မှုတွင် ပါဝင်ကြောင်း၊ နှစ်စဉ်ကျွဲနွား အကောင်ရေ သန်းဂဏန်းမျှ တင်ပို့နေကြောင်း မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) လားရှိုးမြို့တွင် မြို့နေလူအများ စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်နေသည့် နန်းဟေဝန် ပန်းခြံလူသတ်တရားခံကို မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ဇူလိုင် ၁ဝ ရက်တွင် ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ ဇူလိုင် ၄ ရက် နံနက် ၁ဝ နာရီခွဲခန့်တွင် အမျိုးသမီးအလောင်းတစ်လောင်းကို တွေ့မြင်သည့် လူတစ်ဦးက ရဲစခန်းသို့ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားရာ ပြည်နယ်ဒုတိယရဲတပ်ဖွဲ့မှူးနှင့် ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး တို့၏ အနီးကပ်လမ်းညွှန်မှုဖြင့် အမှုစစ်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း ကာ ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဂျပန်နိုင်ငံကို ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်မှာ မြန်မာ့ဆန် ပြန်လည် တင်ပို့တော့မည်
လာမယ့် ၂ဝ၁၄ ခုနစ် အတွင်း ဂျပန်နိုင်ငံကို ဆန်တန်ချိန် ၅ သောင်း တင်ပို့သွားဖို့ ရှိနေတယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးအသင်းချုပ်မှ တာဝန်ရှိသူတွေက RFA ကို ပြောပါတယ်။
နှစ်ပေါင်းများစွာ ဂျပန်နိုင်ငံကို ဆန်တင်ပို့မှု ရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ရာက ဒီနှစ်ကစပြီး ပြန်လည်တင်ပို့လာတာပါ။
လာမယ့်နှစ် အစီအစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးအသင်းချုပ်မှ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးရဲမင်းအောင်က RFA ကို ခုလို ပြောပါတယ်။
"အကိုတို့က ဂျပန်နိုင်ငံကို တန်ချိန် ငါးထောင်ပေါ့နော်၊ ဒါကတော့တကယ့်ကို တန်းမြင့်ဆန် တကယ့် အရည်သွေးမြင့်ဆန်၊ ကမ္ဘာမှာလည်းပဲ ဒီဆန်သည် အဆင့်အတန်းအမြင့်ဆုံးပဲ ဒီတန်းမြင့်ဆန်ကို အကိုတို့ တင်ပို့ရောင်းချတယ်၊ နောက်စားကွဲလည်း တင်ပို့ရောင်းချတယ်၊ လာမယ့်ရာသီမှာ တန်ချိန် ငါးသောင်းလောက်အထိ တင်ပို့ရောင်းချဖို့လည်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်၊ ဂျပန်နိုင်ငံအပါအဝင် ဥရောပဈေးကွက် တန်းမြင့်ဆန်သွားတဲ့ ဈေးကွက်တွေကို ပိုပြီးတော့ ဦးစားပေးပြီးတော့ တင်ပို့ရောင်းချဖို့ အကိုတို့မှာ စက်တွေလည်း အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ၊ အထူးပြု ကုမ္ပဏီတွေရောအားလုံးက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တက်တဲ့ အလေ့အထတွေဖြစ်လာပြီ"
ဂျပန်နိုင်ငံအပြင် ဥရောပဈေးကွက်ကို ၅ မတ်တန် တန်းမြင့် (၁ဝဝ% နီးပါး အဆင့်မြင့်ဆန်) ဆန်တန်ချိန် တထောင်ကျော် တင်ပို့ထားနိုင်ပြီးဖြစ်သလို လာမယ့် ၂၀၁၄ ခုနစ်မှာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကို ဆန်တန်ချိန် ၅ သိန်းတင်ပို့ဖို့ သဘောတူညီထားတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
မြန်မာအနေနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံကို ဆန်ပြန်လည်တင်ပို့နိုင်ခဲ့သလို ရန်ကုန်တိုင်း သံလျင်မြို့နယ်နဲ့ ဧရာဝတီတိုင်း ကျိုက်လတ်မြို့နယ်တွေမှာလည်း ဂျပန်နိုင်ငံ အကူအညီနဲ့ အဆင့်မြင့် ဆန်ကြိတ်ခွဲ သန့်စင်စက်ရုံတွေ တည်ဆောက်နေပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ပြည်ပကို ဆန်တန်ချိန် ၁၂ သိန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပြီး ဒီနှစ်ထဲမှာ ၁၄ သိန်း၊ ရှေ့လာမယ့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ ၁၅ သိန်း တင်ပို့ဖို့ ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီးအား ရှစ်လမ်းသွား လမ်းမကြီးအဖြစ် တိုးချဲ့နိုင်ရေးအတွက် အမေရိကန်နိုင်ငံမှ ဖြစ်နိုင်ခြေ လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။
"ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီးဟာ လက်ရှိမှာ လေးလမ်းသွား လမ်းမကြီးပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ရှစ်လမ်းသွားအဖြစ် တိုးချဲ့နိုင်ဖို့အတွက် ကိုရီးယား၊ ဂျပန်နဲ့ အမေရိကန်တို့ကို အကူအညီ တောင်းထားပါတယ်။ ကိုရီးယားကတော့ ကိုရီးယား-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးတံတားကို ကူညီဖို့ ပိုအားသန်ပုံရတယ်။ JICA ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကူညီတာတွေ အများကြီးဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းလို စီမံကိန်းကြီးအတွက် အကူအညီပေးဖို့ဆိုရင် သူတို့အစိုးရကို ပြန်တင်ပြရတာ ရှိတယ်။ အခုလည်း သူတို့အစိုးရကို ပြန်တင်ပြနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အမေရိကန် အနေနဲ့ကတော့ ရှစ်လမ်းသွား တိုးချဲ့နိုင်ဖို့အတွက် စီမံကိန်း ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကို လေ့လာမှုတွေ ပြုလုပ်ပြီးသွားပြီ။ ဒါပေမဲ့ ခုချိန်ထိ ဘာမှတော့ အကြောင်းမပြန်သေးပါဘူး" ဟု အထူးစီမံကိန်းအဖွဲ့-၁မှ အင်ဂျင်နီယာချုပ် ဦးကြည်ဇော်မြင့်က ပြောကြားခဲ့သည်။
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီးကို ခြောက်နှစ်နှင့်နှစ်လကြာ တည်ဆောက်ပြီးနောက် လက်ရှိလမ်းအရှည်မှာ ၄၄၃ မိုင် ရှည်လျားပြီး ယာဉ်မောင်းကြာချိန် အနေဖြင့် ၁၄ နာရီရှိကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီးတွင် ယာဉ်ရပ်နားစခန်းများ (Rest Camps) လုံလောက်မှု မရှိသေးသဖြင့် တိုးချဲ့တည်ဆောက်လျက် ရှိကြောင်းနှင့် အလားတူ ရဲစခန်းများကိုလည်း ထပ်မံတည်ဆောက်လျက်ရှိကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းမှ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးကျော်လင်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ ယာဉ်ရပ်နား စခန်းများကို မိုင် ၅၀ နှင့် ၇၀ အကြားတွင် တစ်ခုစီ တည်ဆောက်သွားရန် စီစဉ်ထားကြောင်း၊ အမှတ် (၃) လမ်းဆုံမှ မိုင် ၄၀ အကွာရှိ ဘုရားကြီး၊ ဘောနက်ကြီးတွင်တစ်ခု၊ ၁၁၅ မိုင် (ဖြူး)၊ နေပြည်တော်အ၀င် ၂၀၂ မိုင်၊ ၂၈၆ မိုင်ရှိ သီးကုန်း (မိတ္ထီလာ)၊ ၃၅၂ မိုင်ရှိ စကားအင်း (တံတားဦး) လမ်းဆုံတွင်တစ်ခု တည်ဆောက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် နေပြည်တော်အ၀င် ၂၀၂ မိုင်တွင်မူ လက်ရှိတည်ဆောက်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
လေဒီဂါဂါ၏ ARTPOP တေးအယ်လ်ဘမ် နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်တွင် ဖြန့်ချိမည်
ကမ္ဘာကျော် ပေါ့ပ်ဘုရင်မ လေဒီဂါဂါသည် application အသစ်ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော သူမ၏ ARTPOP တေးအယ်လ်ဘမ်သစ်ကို နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်တွင် ဖြန့်ချိသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဆန်းသစ်သော application အသစ်ကို ARTPOP တေးအယ်လ်ဘမ်တွင် ထည့်သွင်းနိုင်ရန် TechHaus နည်းပညာ ကုမ္ပဏီမှ တီထွင် ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်း application သစ်ဖြင့် ထုတ်လုပ်မည့် သူမ၏ ARTPOP တေးအယ်လ်ဘမ် သည် ဂီတသက်တမ်း တစ်လျှောက် အထူးခြားဆုံး ရသကို ပရိသတ်များထံသို့ ပေးစွမ်းနိုင်မည်ဟု လေဒီဂါဂါက မျှော်လင့်ထားသည်။
အဆိုပါ ARTPOP application အသစ်ကို ပရိသတ်များ အနေဖြင့် အသုံးပြု၍ ၎င်းတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို မိတ်ဆွေများအား မျှဝေနိုင်သည့်အပြင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးလည်း ယင်း application အသစ်မှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း၊ နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်တွင် ARTPOP တေးအယ်လ်ဘမ်မှ တေးသီချင်းများကို နားဆင်နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း လေဒီဂါဂါက သူမ၏ ဖေ့စ်ဘွတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ရှင်းလင်း ပြောကြားထားသည်။
အရန်သင့်သုံး ကွန်ကရစ်လောင်းစက်ရုံ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တည်ဆောက်မည်
စင်ကာပူအခြေစိုက် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီ TiongSeng Holdings သည် ပြည်တွင်းမှ အင်အားကြီး ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ ရွှေတောင်တို့ ပူးပေါင်း၍ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသုံး ပုံသွင်းကွန်ကရစ်ပစ္စည်းများ (Precast Components) ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံ တစ်ခုကို တည်ဆောက်သွားမည်ဟု ထုတ်ပြန်ကြေညာသည်။
အဆိုပါစက်ရုံ တည်ဆောက်ရန်အတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းခန့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမည်ဖြစ်ပြီး ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက စတင်နေပြီဖြစ်သော မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေး နှစ် ၂၀ စီမံကိန်းအတွက် ရည်ရွယ်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း ဖြစ်သည်ဟု TiongSeng ကုမ္ပဏီမှ CEO ဖြစ်သူ Peck Lian Guan က ပြောကြားကြောင်း စင်ကာပူ သတင်းဌာနများတွင် ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါစက်ရုံကို TiongSeng Holdings Limited က ပိုင်ဆိုင်သော Robin Village Development ကုမ္ပဏီက ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ရွှေတောင်ဖွံ့ဖြိုးရေး ကုမ္ပဏီ၏ ကုမ္ပဏီခွဲဖြစ်သော High Tech Concrete Technology Co.,Ltd. က ၅၅ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် Sin Mian Development Pte.Ltd. က ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီးအချိုးကျ ပိုင်ဆိုင်ကြမည် ဖြစ်သည်။
ယင်းစက်ရုံမှ ပထမဆုံးထုတ်လုပ်မည့် ပစ္စည်းများကို အစိုးရက အကောင်အထည် ဖော်နေသော အိမ်ရာစီမံကိန်းများတွင် အသုံးပြုသွားနိုင်ရန် မျှော်လင့်နေကြောင်း စင်ကာပူ မီဒီယာအချို့က ဖော်ပြကြသည်။
“Precast Components တွေက ဒီမှာတော့ နည်းနည်းစိမ်းတာပေါ့။ နိုင်ငံတကာမှာတော့ အသုံးတွင်ကျယ်နေပြီ။ ကုန်ကျစရိတ်ရော လုပ်အားရော အများကြီးသက်သာတယ်” ဟု ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးတစ်ဦးက မှတ်ချက်ပေးသည်။
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး ပုံသွင်းကွန်ကရစ် ပစ္စည်းများသည် အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ရာတွင် ကွန်ကရစ်ဖျော်ရည် အသုံးမပြုဘဲ တစ်စချင်းစီ တပ်ဆင်၍ တည်ဆောက်နိုင်စေရန် ကြိုတင် ပြုလုပ်ထားသော နံရံများ၊ အမိုးများ အစရှိသည့် အစိတ်အပိုင်းများ ဖြစ်သည်။
ပုသိမ်မြို့မှ သက္ကယ်ချောင်း တံတားအထိ အရှည်မိုင် ၁၂ မိုင် ရှိပြီး၊ ငပုတောမြို့ အထိဆိုလျှင် ၂၁ မိုင် ၆ ဖာလုံခန့် ရှိသည်။ ယခင်က ရေလမ်းခရီးဖြင့် ပုသိမ်မြို့မှ ငပုတောမြို့သို့ ၃ နာရီကျော်မျှ သွားလာရသော်လည်း သက္ကယ်ချောင်း မြစ်ကူးတံတား ပြီးစီးသွားချိန်၌ နာရီပိုင်းအတွင်း ပုသိမ်မြို့မှ ငပုတောမြို့သို့ သွားလာနိုင်သည်။
အဆိုပါ တံတားဖွင့်ပွဲသို့ ဆောက်လုပ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်လွင်၊ ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းအောင်တို့ တက်ရောက်ကာ ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီး၊ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ယင်းတံတား၏ ထူးခြားချက် အနေဖြင့် တံတားတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် သံမဏိ သံဘောင်များကို ပြည်ပမှပင် မှာယူတင်သွင်းကာ တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးမှ ပြောကြားခဲ့သည်။
ရန်ကုန်မြို့ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု ပြဿနာ နည်းမျိုးစုံဖြင့် ဖြေရှင်းနေသည့်ကြားမှ ပိုမိုဆိုးရွားလာပြီး နယ်ပယ်အသီးသီးရှိ လူမှုဘ၀များကိုပါ ထိခိုက်လာ
လက်ရှိ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးတွင် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု ပြဿနာကို မဖြေရှင်းနိုင် သေးသဖြင့် နယ်ပယ်အသီးသီးရှိ လူမှုဘ၀များကိုပါ ထိခိုက်မှုရှိလာကြောင်း ပြည်သူများထံမှ သိရသည်။
ကားများတင်သွင်းခွင့် ပိုမိုလွတ်လပ် လာပြီးနောက် ကားအများအပြား တင်သွင်းလာခဲ့ပြီး ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု ပြဿနာကို နည်းမျိုးစုံဖြင့် ဖြေရှင်းနေသည့်ကြားက ပိုမိုဆိုးရွား လာခြင်းဖြစ်ပြီး အလွှာစုံ နယ်ပယ်အသီးသီးရှိ လူမှုဘ၀များကို ထိခိုက်မှု ရှိလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
''မြို့ထဲက တိုက်ခန်းတွေ ဈေးမြောက်ပြီး မငှားနိုင်လို့ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းကို ရွှေ့လာရတယ်။ မနက်ဆို ရုံးချိန်မီအောင် အစောကြီး အိပ်ရာ ထရတယ်။ တစ်နေ့တစ်နေ့ ကားပေါ်မှာ သုံးလေးနာရီ အချိန်ကုန်ရတယ်။ တစ်နေ့လုံး ကားပေါ်မှာ အချိန်ကုန်ရတာများတော့ အလုပ်ထဲလည်း ကောင်းကောင်း အာရုံမစိုက်နိုင်။ တစ်နေကုန် ပင်ပန်းတော့ အိမ်ကျတော့ မိသားစုဘ၀ဆိုတာ မရှိတော့ဘူး။ စင်ကာပူလို ဖြစ်ချင်တဲ့ သမ္မတကြီးနဲ့ ခုံးကျော်တံတားတွေ လေးလနဲ့ဆောက်မယ့် ၀န်ကြီးတွေကို ကားကျပ်ကျပ်တွေ အကြာကြီး စီးနေရတဲ့ အချိန်တွေမှာ သတိရတယ်လို့ ပြောပေးပါဗျာ'' ဟု ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း တစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုကျော်ကျော်က ပြောပါသည်။
ယာဉ်များ တင်သွင်းခွင့် လွတ်လပ်လာသဖြင့် ကားဈေးကွက် အတွင်း ကားဈေးနှုန်းများလည်း ခေါက်ချိုးကျော်သည်အထိ ထိုးကျခဲ့သော်လည်း ယင်း၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် ယခင်ကားဝယ် မစီးနိုင်သေးသည့် လူလတ်တန်းစား အများစုကို ကားဝယ်စီးနိုင်သည့် လူတန်းစားအဖြစ် လူနေမှု အဆင့်အတန်းကို မြှင့်တင်မပေး နိုင်သည်ကို တွေ့ရသည်။
မူလက ကားဈေးနှုန်းများ မကျသေးခင်က ကားဝယ်စီးနိုင်သူ လူတန်းစား တစ်ရပ်သာ ယခင်ကားတစ်စီး ပိုင်သူများက သုံးလေးစီး ၀ယ်စီးနိုင်ခဲ့သည့် ပြောင်းလဲမှု တစ်ခုကို ဖန်တီးနိုင်ခဲ့သည်။
သို့သော်လည်း ရန်ကုန်မြို့အတွင်း ကားအစီးရေ များပြားလာ ခြင်းကြောင့် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု များက ကားဝယ်စီးနိုင်သူများ သာမက ကားဝယ်မစီး နိုင်သေးသည့် လူလတ်တန်းစား၊ အောက်ခြေ လူတန်းစားများ၏ လူနေမှုဘ၀များကို ထိခိုက်လာခဲ့သည်ဟု ပြည်သူအများစုက မှတ်ချက်ပြုခဲ့ကြသည်။
ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကြောင့် နယ်ပယ်အသီးသီးရှိ လူမှုဘ၀များကို ထိခိုက်မှု ရှိလာသည် ဆိုရာတွင် နေ့လုပ်နေ့စားများ၊ အစိုးရနှင့် ကုမ္ပဏီ ၀န်ထမ်းများ၊ တက္ကစီ ယာဉ်မောင်းများ၊ ဘတ်စ်ကား စပယ်ယာများ၊ ဘတ်စ်ကား ယာဉ်မောင်းများ၊ နေ့စဉ် ဘတ်စ်ကားစီး ခရီးသည်များနှင့် လုပ်ငန်းရှင်များအထိ ဖြစ်ကြောင်း ယာဉ်ကြော ပိတ်ဆို့မှုကြောင့် လူမှုဘ၀ ထိခိုက်နေရသူများက ပြောကြားသည်။
တစ်နေ့လုံး ကားပေါ်မှာ အချိန်ကုန်ရတာများတော့ အလုပ်ထဲလည်း ကောင်းကောင်း အာရုံမစိုက်နိုင်။ တစ်နေကုန် ပင်ပန်းတော့ အိမ်ကျတော့ မိသားစုဘ၀ဆိုတာ မရှိတော့ဘူး။ စင်ကာပူလို ဖြစ်ချင်တဲ့ သမ္မတကြီးနဲ့ ခုံးကျော်တံတားတွေ လေးလနဲ့ဆောက်မယ့် ၀န်ကြီးတွေကို ကားကျပ်ကျပ်တွေ အကြာကြီး စီးနေရတဲ့ အချိန်တွေမှာ သတိရတယ်လို့ ပြောပေးပါဗျာ...
အထူးသဖြင့် ယာဉ်ကြော ပိတ်ဆို့မှုကြောင့် မြို့သစ်များတွင် နေထိုင်သူများ၏ ကိုယ်ပိုင် အားလပ်ချိန်များသည် ဘတ်စ်ကားများပေါ်တွင် ကုန်ဆုံးနေရကြောင်း မြို့သစ်နေသူများက ဆိုသည်။
''ကျွန်မက ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်မှာ နေပါတယ်။ ရုံးဆင်းချိန်က ညနေ ၅ နာရီ။ ဘတ်စ်ကားစောင့် ရတာက နာရီဝက်။ ကျပ်ကျပ်သိပ်သိပ်နဲ့ ကားပေါ်မှာ စီးရတဲ့ကြားထဲ လမ်းပိတ်ကားပိတ်လို့ အစောဆုံး အိမ်ပြန်ရောက်ချိန်က ၈ နာရီခွဲ ၉ နာရီပဲ။ မနက်ဆို ရုံးချိန်ထက် ၂ နာရီ ၃ နာရီ အိမ်က စောထွက်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိသားစု အချိန်မပေးနိုင်လို့ မိသားစုဘ၀ကို မခံစားနိုင်ဘူး'' ဟု ဒဂုံမြို့သစ်၌နေသော ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း တစ်ဦးဖြစ်သူ မသိန်းသိန်းက ဆိုပါသည်။
အလားတူ နေ့လုပ်နေ့စားများ အနေဖြင့်လည်း ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့ မှုကြောင့် လူမှုဘ၀ ထိခိုက်နေရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်များတွင် ပန်းရံအလုပ်သမား အဖြစ် လုပ်ကိုင်နေသူ တစ်ဦး ဖြစ်သော ကိုစိုးထွန်းက ''နေ့လုပ်နေ့စား အများစုက လှိုင်သာယာ၊ ရွှေပြည်သာ၊ ဒဂုံမြို့သစ်လို နေရာတွေကနေ လာပြီး မြို့ထဲမှာလာ အလုပ်လုပ် ကြရတာပါ။ ကားပိတ်လို့ လုပ်ငန်းခွင် အချိန်မီ မရောက်ရင် အလုပ်ပြုတ်မှာစိုးလို့ မနက် ၄၊ ၅ နာရီလောက် ကတည်းက အိမ်က ထွက်ရတယ်။ ကားပိတ်လို့ နေ့တိုင်းမိုးချုပ်မှ အိမ်ပြန်ရောက်တယ်။ တစ်နေ့လုပ်မှ တစ်နေ့စားဆိုတော့ အချို့နေ့တွေမှာ ကိုယ့်ဆီက ပိုက်ဆံရမှ ချက်ပြုတ်ရမှာ ဆိုတော့ ကိုယ်နောက်ကျလို့ မိသားစုက ကိုယ့်ကိုစောင့်ပြီး ထမင်းစားရတာတွေ ရှိတယ်'' ဟု ရင်ဖွင့်ခဲ့သည်။
ကားပိတ်မည် စိုးသဖြင့် လမ်းကြော ရှောင်မောင်းရသဖြင့် အချိန်ပိုကုန်သဖြင့် အကြောင်းရေများများ မဆွဲနိုင်သည့်အပြင် ဒီဇယ်၊ ဓာတ်ဆီ၊ ဂက်စ်ပိုကုန်သဖြင့် ၀င်ငွေကို များစွာ ထိခိုက်နေရကြောင်းလည်း တက္ကစီယာဉ်မောင်း များထံမှ သိရသည်။
ထို့ပြင် ယာဉ်ရပ်နားရာ နေရာများ ရှားပါးမှုကြောင့် ရန်ကုန်မြို့ရှိ လမ်းဘေးဝဲယာ တစ်လျှောက် ကားများ ဦးရာလူစနစ်ဖြင့် ယာဉ်ရပ်နားလျက်ရှိပြီး ယာဉ်နှစ်ထပ်၊ သုံးထပ် ရပ်နားမှုများကလည်း ယာဉ်ကြော ပိတ်ဆို့မှုကို ပိုမိုဆိုးရွားစေခဲ့သည်။ အချက်အချာကျရာ နေရာများတွင် ယာဉ်ရပ်နားရန် နေရာရှားပါးမှုကြောင့် သွားလာရန် ပိုမိုခက်ခဲလာခဲ့ပြီး သက်ရောက်မှု အနေဖြင့် အဆိုပါ နေရာများရှိ အရောင်းဆိုင်ခန်းများတွင် လူဝင်ရောက်မှု လျော့နည်းလာခဲ့ကာ ဈေးရောင်း ဈေးဝယ် လူတန်းစားများ၏ လူမှုဘ၀များကိုပါ ထိခိုက်လာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့ ရန်ကုန်မြို့တွင် ဆိုးရွားစွာ ယာဉ်ကြော ပိတ်ဆို့မှုကြောင့် လမ်းပေါ်တွင်သာ အချိန်ကုန် နေရသဖြင့် လုပ်ငန်းရှင်များ အပါအ၀င် နယ်ပယ်အသီးသီးမှ ပြည်သူများ၏ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ ကြန့်ကြာမှုများလည်း ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
စီးပွားရေး ပညာရှင် ပါမောက္ဓ ဒေါ်ရီရီမြင့်က ''နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်လာနိုင်ခြေတွေကို စဉ်းစားတာ အားနည်းလို့ ခုလိုဖြစ်နေတာပါ။ အရင်ထက် ကားဈေးကျလို့ ကားစီး နိုင်တာတွေ များလာတယ်။ လမ်းတွေကို ကြိုပြီးပြင်ဆင် မထားတော့ လမ်းတွေပိတ်ကုန် ကျပ်ကုန်တယ်။ ကားတွေများလာတယ် ဆိုပေမယ့် လူတွေ အဆင်မပြေကြဘူး။ အခုထိ ကားတွယ်စီးနေကြတာ။ ကားဂိတ်မှာ လူတွေစုပြုံတိုးဝှေ့ပြီး စီးနေရတာ မြင်ရတာ စိတ်မကောင်းဘူး။ မြန်မာပြည်က ဘာမှအဆင်သင့် မဖြစ်ဘူး။ လတ်တလော အဆင်မပြေတာ နားလည်ပေးလို့ ရပေမယ့် အ စိုးရက အမြန်ဆုံး ဖြေရှင်းဖို့လိုတယ်။ ကားဝယ်စီးတာက ပြည်သူတွေရဲ့ အခွင့်အရေးပဲ။ အစိုးရက လမ်းတွေ၊ တံတားတွေ ဖောက်ပေးဖို့ လုံလောက်အောင် ပြင်ဆင်ဖို့ တာဝန် ရှိတယ်'' ဟု ထင်မြင်ချက် ပေးပါသည်။
ရန်ကုန်မြို့၏ ယာဉ်ကြော ပိတ်ဆို့မှု ပြဿနာသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ သိသာလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး အစိုးရမှ ခုံးကျော်တံတားများနှင့် လမ်းများပြုပြင် တိုးချဲ့ခြင်းများ ဆောင်ရွက်နေသည့် လမ်းပိတ်ဆို့မှုသည် ပိုမိုဆိုးရွားလာခြင်း ဖြစ်သည်။
ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု ပြဿနာသည် နေ့စဉ်သွားလာ လှုပ်ရှားနေသည့် အများပြည်သူများ အကြားသာမက ရန်ကုန်မြို့တော်သို့ လာရောက်ကြသော နိုင်ငံခြား ခရီးသွားများ၊ နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များပါ ရိုက်ခတ်မှု ရှိလာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ရန်ကုန်မြို့၏ အဓိက ၀င်ပေါက်ဖြစ်သည့် ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်မှ မြို့တွင်းသို့ ၀င်ရောက်သည့် အဓိက လမ်းမကြီးများ ဖြစ်သည့် ပြည်လမ်းနှင့် ကမ္ဘာအေး ဘုရားလမ်းများတွင်ပါ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု ပိုမိုဆိုးရွား လာခြင်းကြောင့် နိုင်ငံခြား ခရီးသွားများအကြား ရန်ကုန် မြို့၏ ယာဉ်ပိတ်ဆို့မှုသည် ပြောစမှတ်တွင်စ ပြုလာခဲ့သည်။
တစ်ချိန်က အာရှတိုက်၏ နာမည်ကျော် မြို့ကြီးတစ်မြို့၏ အလှအပနှင့် ခမ်းနားထည်ဝါမှု အငွေ့အသက်တို့ကို တွေ့မြင်လို၍ လာရောက် လေ့လာကြသည့် နိုင်ငံခြား ခရီးသွား ဧည့်သည်များသည်လည်း ရန်ကုန်မြို့၏ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကို စတင်ခံစားကြရပြီး ခင်းလက်စလမ်းများ၊ ပြုပြင်ဆဲလမ်းများ၊ ချိုင့်ခွက်များကြားမှ တရွေ့ရွေ့ မောင်းနှင်သော ကားပေါ်တွင်သာ တစ်နေ့တာ အချိန်များစွာကို ကုန်ဆုံးလျက် ရှိသည်။
ရန်ကုန်မြို့ရှိ တည်ဆောက်ဆဲ ခုံးကျော်တံတား လုပ်ငန်းခွင်အနီး ပတ်ဝန်းကျင်များနှင့် လမ်းခင်းကျင်း ချဲ့ထွင်နေသည့်နေရာ ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု အပြင် တည်ဆောက်ပြီး ခုံးကျော်တံတား ပတ်ဝန်းကျင်၌လည်း ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုများ ရှိနေဆဲပင် ဖြစ်သည်။ မိုးတွင်းကာလ ဖြစ်သဖြင့် လမ်းများပေါ်တွင် ရေကြီးရေလျှံကာ ယာဉ်ကြော ပိတ်ဆို့မှုကို ပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တွင်း နေ့စဉ်သွားလာနေသူ၏ ပြောကြားချက်များအရ သိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင်း ယာဉ်ကြော ပိတ်ဆို့မှု ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက် အဓိက လမ်းဆုံနေရာများတွင် ခုံးကျော်တံတားများ ဆောက်လုပ်ရန် ၂၀၁၁ ခု နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် စတင်စီစဉ်ခဲ့ကာ လှည်းတန်း၊ ရွှေဂုံတိုင်၊ ဘုရင့်နောင်နှင့် တာမွေ ငါးလမ်းဆုံ မီးပွိုင့်များတွင် ခုံးကျော်တံတားများကို လေးလအတွင်း အပြီးတည်ဆောက်မည်ဟု ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သို့သော် လှည်းတန်း ခုံးကျော်တံတားကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှသာ ပန္နက်တင်ကာ စတင် တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပြီး ဘုရင့်နောင် ခုံးကျော်တံတား၊ ရွှေဂုံတိုင် ခုံးကျော်တံတားများကို ဆက်လက် တည်ဆောက်ဆဲဖြစ်ကာ တာမွေငါးလမ်းဆုံ ခုံးကျော်တံတားမှာမူ မဆောက်လုပ် ဖြစ်တော့ဟုလည်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ခုံးကျော်တံတား ဆောက်လုပ်သည့် နေရာများမှာ ရန်ကုန်မြို့ရှိ အဓိက ခြောက်လမ်းသွားများ ဖြစ်သည့် ပြည်လမ်း၊ ကမ္ဘာအေး စေတီလမ်းနှင့် ဘုရင့်နောင် လမ်းမများပေါ်တွင် ဖြစ်သောကြောင့် ခုံးကျော်တံတား ဆောက်လုပ်နေစဉ် ကာလများအတွင်း ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုများ ဆိုးရွားစွာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း၊ လှည်တန်း ခုံးကျော်တံတားကို တည်ဆောက်ချိန် တစ်နှစ်ကျော်ကြာသည့် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် စတင်အသုံးပြုခွင့် ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ လှည်းတန်းခုံးကျော် တံတားပြီးစီးကာ အသုံးပြုခွင့်ရ၍ လှည်းတန်း အနီးတစ်ဝိုက် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု အနည်းငယ် သက်သာသွားသော်လည်း ခုံးကျော်တံတားအဆင်း စိုက်ပျိုးရေး မှတ်တိုက်အနီးမှ စတင်၍ ဟံသာဝတီလမ်း တောက်လျှောက် ယာဉ်ကြောများ ပိတ်ဆို့လာပြီး မိုးရွာသည့် အချိန်များတွင် ပိုမိုဆိုးရွား နေသည်ဟု သိရသည်။
သို့ဖြစ်ရာ ခုံးကျော်တံတား ဆောက်လိုက်သော်လည်း ယာဉ်ကြော ပိတ်ဆို့မှုကို အနည်းငယ်သာ ဖြေရှင်းနိုင်သည့် အတွက် ထပ်မံ ဆောက်လုပ်နေသည့် ခုံးကျော်တံတား နှစ်စင်းမှာလည်း ယာဉ်ကြော ပိတ်ဆို့မှုများကို အများအပြား ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း ရှိမရှိမှာ မသေချာသည့် အနေအထားပင် ဖြစ်နေကြောင်း သုံးသပ်နေကြသည်။
ထို့နောက် တိုးပွားသည့် ယာဉ်အစီးရေနှင့်အတူ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မည့် လမ်းချဲ့ထွင်မှုများကို စဉ်းစားခဲ့ကြကြောင်း၊ သို့သော် လမ်းချဲ့ထွင်မှု များမှာလည်း အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ ချဲ့ထွင်၍ရပြီး အများအပြား ပြုလုပ်၍ မရနိုင်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီမှ သိရသည်။ ထို့အတွက် လမ်းပေါ်တွင် ယာဉ်များ ရပ်တန့်၍ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုများ မဖြစ်စေရန်အတွက် လမ်းသားများအား ချဲ့ထွင်၍ အခမဲ့ ကားပါကင်များ ပြုလုပ်ပေး၍လည်း ဖြေရှင်းခဲ့ကြောင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ သိမ်ဖြူလမ်း၊ ဗိုလ်တထောင် ဘုရားလမ်း၊ ရေကျော်အနီး၊ အထက်ကြည့်မြင်တိုင် လမ်းများရှိ နေရာအချို့တွင် အခမဲ့ ယာဉ်ရပ်နားနိုင်သည့် နေရာများ ပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြောင်း သို့သော် ယာဉ်ရပ်နားသည့် နေရာများတွင် ဈေးသည်အချို့ ဈေးရောင်းချခြင်းနှင့်အတူ ဓာတ်တိုင်များ ခံနေခြင်း စသည့်တို့ကြောင့် အချို့ယာဉ်များ မရပ်ဘဲ လမ်းပေါ်တွင်သာ ရပ်နေခြင်းကြောင့် ယာဉ်ကြောများ ပိတ်ဆို့နေဆဲပင် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်လာနိုင်ခြေတွေကို စဉ်းစားတာ အားနည်းလို့ ခုလိုဖြစ်နေတာပါ။ အရင်ထက် ကားဈေးကျလို့ ကားစီး နိုင်တာတွေ များလာတယ်။ လမ်းတွေကို ကြိုပြီးပြင်ဆင် မထားတော့ လမ်းတွေပိတ်ကုန် ကျပ်ကုန်တယ်။ ကားတွေများလာတယ် ဆိုပေမယ့် လူတွေ အဆင်မပြေကြဘူး။ အခုထိ ကားတွယ်စီးနေကြတာ။ ကားဂိတ်မှာ လူတွေစုပြုံတိုးဝှေ့ပြီး စီးနေရတာ မြင်ရတာ စိတ်မကောင်းဘူး။ မြန်မာပြည်က ဘာမှအဆင်သင့် မဖြစ်ဘူး...
ယင်းအပြင် ယာဉ်ရပ်နား စခန်းများဖြင့် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု ဖြေ ရှင်းရန် စဉ်းစားခဲ့ကြပြီး လက်ရှိဗိုလ်ချုပ်ဈေး လဟာပြင်မြေကွက် နေရာရှိ ယာဉ်ရပ်နား စခန်းအပြင် သူနာပြု တက္ကသိုလ်ရှေ့တွင် ယာဉ်ရပ်နား စခန်းတစ်ခုနှင့် ဗိုလ်တထောင် အမှတ်(၆) သစ်စက်ဝင်း အတွင်း ကွန်တိန်နာ ယာဉ်ရပ်နားစခန်း တစ်ခုကိုလည်း အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော် သူနာပြု တက္ကသိုလ်ရှေ့ရှိ ယာဉ်ရပ်နားစခန်းမှာ ဟံသာဝတီ ယာဉ်ရောင်းဝယ်ရး စခန်းမှ ယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းများ ပြောင်းရွှေခဲ့သောကြောင့် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း မရှိကြောင်း သိရသည်။
သို့ဖြစ်၍ လမ်းများချဲ့ထွင်မှုများကို ပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုမှာ လျော့ကျသွားခြင်း မရှိသေးဘဲ ပိုဆိုးရွားပြီး ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု များကြောင့် ခရီးသွား ပြည်သူများ လမ်းပေါ်တွင်သာ အချိန်များ ကုန်ဆုံးနေရကြောင်း၊ ရန်ကုန်မြို့ရှိ လမ်းများချဲ့ထွင်စရာ ကုန်သွားပါက ရန်ကုန်မြို့တွင်း သွားလာ ၀င်ထွက်သည့် ကားအရေအတွက်ကို ကန့်သတ်သွားမည့် အစီအစဉ်ကို ပြုလုပ်ပေးရမည် ဖြစ်ကြောင်း ဇွန် ၁၂ ရက်က ရန်ကုန်မြို့တော် ခန်းမတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော ရန်ကုန်မြို့တွင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လျင်မြန်မှုဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန် ဦးလှမြင့်က ပြောကြားခဲ့သည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိ အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ရာတွင် လေးထပ်နှင့် အထက်ဆိုပါက ယာဉ်ရပ်နားရန်နေရာ (ကားပါကင်)ကို တစ်ခန်းလျှင် တစ်စီးစာ မဖြစ်မနေ ထည့်သွင်းရန် ညွှန်ကြားထားကြောင်း သိရသည်။ သို့သော် ရန်ကုန် မြို့တွင်း အဆောက်အအုံများတွင် ကားပါကင် မလုံလောက်သည့် အခြေအနေများကြောင့် ယာဉ်ကြောများ ပိတ်ဆို့နေ၍ အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံကြီးများ ဆောက်လုပ်မည် ဆိုပါက ကားပါကင် အလုံအလောက် ထားရှိရန် တင်ပြလာမှသာ ဆောက်လုပ်ခွင့် ပြုသင့်ကြောင်းလည်း ရန်ကုန်မြို့တွင် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဆိုင်ရာများကို လေ့လာခဲ့သော JICA အဖွဲ့မှ သုံးသပ်ခဲ့ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ကိုယ်ပိုင်ကား ရပ်နားရန် နေရာရှိမှသာ ကားဝယ်ယူခွင့် ရှိကြောင်းလည်း သိရသည်။
ထပ်မံ၍ ဆီးဂိမ်းစ်ပြိုင်ပွဲအတွက် ရည်ရွယ်၍ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု လျော့နည်းစေရန် ရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိ အနော်ရထာလမ်း၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ကုန်သည်လမ်း၊ စသည့်လမ်းများပေါ်တွင် အခမဲ့ ယာဉ်ရပ်နားနိုင်သည့် နေရာများ ထပ်မံတိုးချဲခြင်းနှင့် အတူ ဝေဇယန္တာလမ်း၊ ဦးချစ်မောင်လမ်း စသည့်များတွင် ပြုလုပ်လျက် ရှိသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုး သုံးခဲ့ကြသော်လည်း ထိရောက်သည့် အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိသည်ကို မတွေ့ရကြောင်း ထို့ကြောင့် ကားတင်သွင်းခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြန်လည်စိစစ် ထိန်းသိမ်းပေးရတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ထိုသို့ ကားတင်သွင်းခွင့် ဆိုင်ရာ မူဝါဒ အပြောင်းအလဲများ ပြုလုပ်မည် ဆိုပါကလည်း ပြည်သူလူထုသို့ လုံလောက်သည့် အချိန်သတ်မှတ်ကာ ကြိုတင် အသိပေးသင့်ကြောင်း မော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများက အကြံပြုခဲ့ကြသည်။
ထိုသို့ ကားတင်သွင်းခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ အဓိက ထိန်းသိမ်းစိစစ် ပေးသင့်သည့် အချက်မှာ အသုံးပြုပြီး ကားများဖြစ်သည့် (Used car) များ တင်သွင်းမှုကို ကန့်သတ်ကာ ကားသစ်များကိုသာ တင်သွင်းခွင့် ပြုသင့်ကြောင်း၊ လက်ယာ ကပ်မောင်းရသည့် လမ်းစည်းကမ်းနှင့် စတီယာရင် ညာမောင်း ဖြစ်နေမှု လိုက်လျောညီထွေမှု မရှိ၍ ဖြစ်ပွားခဲ့ရသည့် မတော်တဆမှုများ ရှိခဲ့သောကြောင့် ကားသစ်များ တင်သွင်းခွင့် ပြုရာတွင်လည်း ဘယ်မောင်းများကိုသာ တင်သွင်းခွင့် ပြုသင့်ကြောင်း မော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ တစ်ဦးက အကြံပြုခဲ့ပါသည်။
''ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Trade Policy က တိတိကျကျ မရှိဘူး။ Infrastructure နဲ့ ချိန်ဆမထားဘူး။ Public Transport နဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း စီမံချက်မရှိဘူး။ ဒီ တစ်နှစ်၊ နှစ်နှစ်အတွင်း အစိုးရရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် တချို့ဟာ အမှတ်ရရင်ပြီးရော အလွယ်လုပ်တဲ့ Policy မျိုးတွေ ဖြစ်နေတယ်။ အခုလို ကားကျပ်ပြီး လူတန်းစားပေါင်းစုံ ဒုက္ခရောက်ရတာဟာ ကားတင်သွင်းမှုနဲ့ အခြေခံ အဆောက်အအုံကို ချိန်ဆ မထားနိုင်တဲ့ ပြဿနာပါ'' ဟု အမည်မဖော်လိုသူ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ကြီး တစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
ယခင်ကာလများက နိုင်ငံ၏ ကန့်သတ် ချုပ်ချယ်မှုများကြားမှ ပြန်လည်လွတ်လပ်စွာ တင်သွင်းခွင့် ပြုရသည့် အခြေအနေဖြစ်၍ (Used car) များ အများအပြား တင်သွင်းခွင့် ပြုခဲ့ခြင်းမှာ သင့်တော်သော်လည်း လက်ရှိနိုင်ငံတကာမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ၀င်ရောက်လာသည့် အထိုက်အလျောက် ပွင့်လင်းလာသော အခြေအနေတွင် ကားသစ်များသာ တင်သွင်းခွင့် ပြုရတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်သူများလည်း ရှိနေသည်။
နိုင်ငံတွင်းသို့ (Used car) များသာ တင်သွင်းနေပါက ကားသစ်များထက် ကြံ့ခိုင်မှုပိုင်းတွင် ပိုမိုလျင်မြန်စွာ ကျဆင်းနိုင်သဖြင့် ယခင်ကားဟောင်းဈေးကွက် သံသရာသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိပြီး ကားများမှ ထွက်သည့် မီးခိုးငွေ့များကြောင့် လေထုညစ်ညမ်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်း ထို့ကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ရှုထောင့်အရ ကြည့်မည်ဆိုပါက ကားသစ်များကိုသာ တင်သွင်းခွင့် ပြုသင့်ကြောင်း၊ ကားသစ်များ တင်သွင်းမှုကို မူဝါဒများနှင့် စနစ်တကျ ထိန်းချုပ်တင်သွင်းခြင်းဖြင့် (Used car) များ ဖောဖောသီသီ မ၀င်ရောက် နိုင်တော့သဖြင့် ကားအရေအတွက်များပြီး ယာဉ်ကြော ပိတ်ဆို့နေမှုကို နည်းလမ်း တစ်မျိုးဖြင့် ဖြေရှင်းရာ ရောက်မည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း ကားတင်သွင်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စောင့်ကြည့် နေသူများက သုံးသပ်ပါသည်။
ဘုရင့်နောင် လမ်းမကြီးပေါ်ရှိ ဘုရင့်နောင်လမ်းဆုံ တံတားစီမံကိန်းအနီး ယဉ်ကြောကျပ်နေမှုများ ဇူလိုင် ၁၀ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ-အောင်ရဲကို)
အင်ဒိုနီးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ် စသည့် နိုင်ငံများတွင် (Used car) များကို လုံးဝတင်သွင်းခွင့် မပြုကြောင်း လက်ရှိမလေးရှား နိုင်ငံတွင် (Used car) များ တင်သွင်းမှုကို ခွင့်ပြုထားသော်လည်း ၂၀၁၅ ခု နှစ်တွင် (Used) များကို တင်သွင်းခွင့် ပြုတော့မည် မဟုတ်ကြောင်း စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ၃ နှစ် သက်တမ်း အောက် ကားဟောင်းများကိုသာ တင်သွင်းခွင့်ပြုပြီး ကားဟောင်း၏ သက်တမ်းကို နိုင်ငံခြားတွင် မှတ်ပုံတင်သည့်နေ့မှ စတင် သတ်မှတ်ကြောင်း သိရသည်။
ယခုနှစ် မေလကုန်ပိုင်းတွင် KIA ကုမ္ပဏီ၏ ပထမဦးဆုံး ကားအရောင်းပြခန်း စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး လာမည့် သြဂုတ်လတွင် Ford၊ နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် Mercedes နှင့် Chevrolet ကုမ္ပဏီတို့က ကားအရောင်းပြခန်းနှင့် ၀န်ဆောင်မှု စင်တာများကို အပြိုင်အဆိုင် စတင်ဖွင့်လှစ်မည် ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ဂျပန်ကား ကုမ္ပဏီများဖြစ်သော Toyota၊ Nissan၊ Honda၊ Suzuki၊ Mitsubishi ကားကုမ္ပဏီ များကလည်း ၀န်ဆောင်မှု စင်တာများ တိုးချဲ့ ဖွင့်လှစ်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာဈေးကွက်သို့ တရားဝင် စတင်ဝင်ရောက်သည့် နိုင်ငံတကာ ကားကုမ္ပဏီများသည် ကားအသစ် များကိုသာ တင်သွင်းရောင်းချ သွားမည်ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့အဆင့် ၀န်ဆောင်မှုများ ပေးအပ်မည် ဖြစ်ခြင်းကြောင့် လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အသုံးပြုပြီး ကားဟောင်း ဈေးကွက်ကို တဖြည်းဖြည်း ကျော်လွန်နိုင်မည်ဟု နိုင်ငံခြား ကားကုမ္ပဏီများနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိခဲ့သည့် တာဝန်ရှိသူများက ဆိုပါသည်။
KIA ကားကုမ္ပဏီနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေသည့် SSS မှ ဒါရိုက်တာ ဦးကျော်သူရကလည်း ''ကျွန်တော်တို့ ကားသစ် ဘယ်မောင်းတွေကိုပဲ တင်သွင်းရောင်းချနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိဈေးကွက်မှာ ကားဟောင်းတွေ ပိုအ၀ယ်လိုက် နေပေမယ့် နောက်ပိုင်း ပြောင်းလဲလာမယ့် လူနေမှု အဆင့်အတန်း အခြေအနေတွေနဲ့ အညီ ကားသစ်တွေနဲ့ ရရှိမယ့် ၀န်ဆောင်မှုတွေကို လူကြိုက်များလာမှာပါ'' ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဇွန် ၂၁ ရက် အထိ သွင်းကုန်ပါမစ်ဖြင့် မော်တော်ယာဉ် ၂၀၉၆၂ စီး တင်သွင်းခွင့် ပြုခဲ့ပြီး ဇွန်လအတွင်း က.ည.န မှ အစားထိုးယာဉ် ပါမစ်ထုတ်ပေးမှု အစီးရေ ၉၇၀၀၀ ကျော် ရှိလာပြီ ဖြစ်သည်။ လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးချင်းအလိုက် မော်တော်ယာဉ် သွင်းကုန်ပါမစ်များကို ၂၀၁၂ခုနှစ် သြဂုတ်တွင် စတင်ခွင့်ပြု ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယာဉ်အို၊ ယာဉ်ဟောင်းများ ဖျက်သိမ်း၍ အစားထိုး တင်သွင်းခြင်း စီမံချက်ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာတွင် စတင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၃ခုနှစ် ဇွန် ၂၀ ရက်အထိ ယာဉ်အိုယာဉ်ဟောင်း အပ်နှံမှုစီးရေ ၈၄၈၆၅ စီးဖြစ်ပြီး ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု မှာ ၈၇ ဒသမ ၁၇ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တိုးပွားလာသည့် ကားစီးရေများနှင့်အတူ ရန်ကုန်မြို့၏ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု ပြဿနာသည် ပိုမို ဆိုးရွားလျက်ရှိပြီး အစိုးရကလည်း ကာလတို ဖြေရှင်းနည်း များစွာကို အသုံးပြု ဖြေရှင်းနေသော်လည်း လိုအပ်နေသည့် အခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အများပြည်သူ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အစီအစဉ် ဖြည့်ဆည်းမှုများ အားနည်းနေသေးကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့၏ မြိုပြတည်ဆောက်မှုပုံစံ၊ အဓိက အခြေခံ အဆောက်အဦဖြစ်သော လမ်းများ၏ အခြေအနေကို အဓိကထည့်သွင်း မစဉ်းစားဘဲ လူဦးရေနှင့် တွက်၍ ကားစီးရေ များပြားရေးကိုသာ အဓိက ဦးတည်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ရန်ကုန်မြို့၏ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု ပြဿနာ ပိုမိုဆိုးရွား လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပညာရှင်များက ထင်မြင် သုံးသပ်ခဲ့သည်။
Moto-X အတွက် ကြော်ငြာအသုံးစရိတ် ဒေါ်လာ သန်း ၅၀၀ Google သုံးစွဲမည်
Google သည် ၎င်း၏ စမတ်ဖုန်းသစ် ‪‎Moto‬-‪‎X‬ အတွက် ဈေးကွက်ထိုးဖောက်နိုင်ရန် ကြော်ငြာအသုံးစရိတ်ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၅၀၀ အထိ ကျခံသုံးစွဲမည်ဖြစ်သည်။ ထိုပမာဏမှာ ယမန်နှစ်အတွင်းက ‪‎Apple‬ ထုတ်ကုန်များအားလုံးအတွက် အသုံးပြုခဲ့သော ကြော်ငြာကုန်ကျစရိတ်နှင့် ညီမျှကြောင်းလည်း သိရသည်။
အတည်မပြုနိုင်သော သတင်းများအရ ‪‎Google‬ ၏ Moto-X စမတ်ဖုန်း အချက်အလက်အချို့မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
‪‎screen‬ - 4.7-inch
‪‎processor‬ - 1.7GHz dual-core
‪‎OS‬ - ‪‎Android‬ 4.2 (‪‎Jelly‬ ‪‎Bean‬)
‪‎Internal‬ ‪‎Storage‬ - 16GB
‪‎RAM‬ - 2GB
‪‎Camera‬ - 10 Megapixel
CAmera (front) -2Megapixel
(ပုံတွင် စမတ်ဖုန်းသစ် Moto-X ကို Google ဥက္ကဋ္ဌ အဲရစ် ရှမစ်ဒ်က ‪‎Sun‬ ‪‎Valley‬ တွင် ပြုလုပ်သည့် ‪‎Allen‬ & ‪‎Co‬ ‪‎conference‬ တွင် ကိုင်တွယ်သုံးစွဲပြစဉ် တွေ့ရသည်)
မေလ ၂၅ မှ ဇူလိုင် ၉ ရက်အထိ မလေးရှားနိုင်ငံမှ ပြန်လည် ရောက်ရှိလာသူ ၇၃၄၂ ဦးရှိလာ
၂၀၁၃ ခုနှစ် မေ ၂၅ ရက်မှ ဇူလိုင် ၉ ရက်အထိ တစ်လကျော် ကာလအတွင်း မလေးရှားနိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိလာသူ စုစုပေါင်း ၇၃၄၂ ဦးရှိပြီး ထိုသူများထဲတွင် CI မြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထားဖြင့် ရောက်ရှိလာသူ ၈၄၈ ဦး ပါဝင်ကြောင်း ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး ဌာနမှ လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်သီဟ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
''မေ ၂၅ ရက်ကနေ ဇူလိုင် ၉ ရက်အထိ မလေးရှားကနေ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လာသူ စုစုပေါင်း ၇၃၄၂ ဦး ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီထဲမှာ CI နဲ့ ရောက်လာသူက ၈၄၈ ဦးပါ'' ဟု ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် လူဝင်မှုကြီး ကြပ်ရေးဌာနမှ လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်သီဟက ပြောကြားခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် မေ ၃၀ ရက်မှ ဇွန်လ ပထမ အပတ်အတွင်း မလေးရှားနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသား အချို့ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လာခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လေကြောင်းလိုင်း တစ်ခုဖြစ်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာလေကြောင်း MAI မှလည်း ကွာလာလမ်ပူ-ရန်ကုန် ခရီးစဉ်၏ လေယာဉ်လက်မှတ် ဈေးနှုန်းအား ထက်ဝက် လျှော့ချပေးခဲ့သည်။
ယင်းပြင် Air Bagan, Asian Wings နှင့် ရွှေမြန်မာ လေကြောင်းလိုင်း များမှလည်း ယင်းတို့ ပြေးဆွဲနေသည့် မြို့များသို့ ပြန်လိုသည့် မလေးရှားနိုင်ငံမှ ပြန်လည်ရောက် ရှိလာသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား နေရပ်သို့ ပြန်လိုပါက အခမဲ့ စီးနင်းခွင့် ပေးခဲ့သည်။ မလေးရှား နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေသည့် မြန်မာအလုပ်သမား ခုနစ်သိန်းကျော်ရှိပြီး တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ဖြင့် သွားရောက် လုပ်ကိုင်နေသူ သုံးသိန်းသုံးသောင်း ကျော်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ယင်းပြင် မလေးရှားနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေပြီး အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် တရားမ၀င်နေထိုင် အလုပ် လုပ်ကိုင်နေသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများကို မြန်မာသံရုံးမှ ထုတ်ပေးသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထား ရှိရုံမျဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လာနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးဌာနမှ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးကျော်မြင့်၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
''မလေးရှားမှာ ရောက်နေတဲ့ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် မရှိတဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံသားတွေ အနေနဲ့ မြန်မာသံရုံးကို သတင်းပို့ဆက်သွယ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လာလို့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ဘယ်လိုအရေးယူမှု မျိုးမှ လုပ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကြားခံပွဲစားတွေ စကားကိုယုံပြီး ပတ်စ်ပို့အတုနဲ့ ပြန်လာရင်သာ ထောင်ဒဏ်ခြောက် လကနေငါးနှစ်အထိ ကျခံရမှာဖြစ်ပါတယ်''ဟု ၎င်းက ဆက်လက် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
၁၃.၇.၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၁၅၃၀ အချိန်ခန့်တွင်ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်နေ မဇင်မာသည် တူမများဖြစ်သော မသိမ့်သိမ့်ဟန်၊ မဝေသဇင်နိုင်၊ မပပတို့နှင့်အတူ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ပြည်လမ်းရှိ
Junction Square ကုန်တိုက်သို့ ဈေးဝယ်ရန် ရောက်ရှိပြီး ကုန်တိုက်အတွင်းရှိ Promotion အရောင်း
၎င်းလွယ်ထားသောဘေးလွယ်အိတ်မှာ ဇစ်ပွင့် လျက်ရှိသဖြင့်
စစ်ဆေးရာ အိတ်အတွင်းထည့်ထားသော ငွေကျပ် (၇၈၅၀၀၀)မှာ ပျောက်ဆုံးနေသည်ကို တွေ့ရ၍ ကမာရွတ်မြို့မရဲစခန်းသို့တိုင်ကြားခဲ့ရာ (ပ) ၃၁၅/၂၀၁၃ ၊ပုဒ်မ ၃၇၉(နှိုက်)ဖြင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါကုန်တိုက် Promotion ရှိုးပွဲ လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်
လျက်ရှိသည့် ကမာရွတ်မြို့မရဲစခန်း တပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ အဆိုပါခါးပိုက်နှိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူ မဥမ္မာ၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ လမ်းမတော် မြို့နယ်အား စုံစမ်းရှာဖွေဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပြီး သက်သေခံငွေများအားပြန်လည်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်းနှင့် တရားခံမဥမ္မာအား အခြားခါးပိုက်နှိုက်မှုများဖေါ်ထုတ် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သတင်း ရရှိပါသည်။
ကမ္ဘာ့ပေါ် သက်တန်း အကြာရှည် ဆုံး ကြေးနန်း ဌာန တခုဖြစ်တဲ့ အိန္ဒိယ အစိုးရရဲ့ ကြေးနန်း ဌာနကို ဒီကနေ့က စလို့ ပိတ်ပစ်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သက်တမ်း အားဖြစ် ၁၆၃ နှစ်ရှိနေပြီ ဖြစ်တဲ့ အိန္ဒိယ ကြေးနန်း လုပ်ငန်းဟာ တနှစ်ကို ဒေါ်လာသန်း ၂၀ ကျော် ဆုံးရှုံးနေရာတာ ဖြစ်ပြီး၊ မိုဘိုင်းဖုန်း သုံးစွဲမှု ကျယ်ပြန့် လာတာကြောင့် ဒီကြေးနန်းဌာနကို အသုံးပြုတာဟာလည်း ထိုးကျ သွားတယ်လို့ တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။
အမှန်တော့ အစားစားပြီးချင်း ရေသောက်ခြင်းကို ဆေးပညာရှင် များက အားမပေး ပါဘူး။ အစားစားပြီး တစ်နာရီခွဲ အတွင်း ရေသောက်ရင် ယင်းရေဟာ မိမိရဲ့  အစာချေစနစ်ကို အနှောက့်အယှက် ပေးနိုင်လို့ ဖြစ်ပါ တယ်။
ဒီမေးခွန်းကို မေးသူလာသူက တစိမ်းတစ်ယောက်မဟုတ်တော့ ဖြေတော့ ဖြေပေးရမှာပဲ ။ ဘယ်သူက မေးတာလဲဆိုရင် .ဦးကုမုဒဆိုတဲ့ ဦးဇင်းကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေလို့ပါ....
စာရေးသူ အရှင် ကုမုဒ သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဗုဒ္ဓဂယာတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရသွား ခဲ့သော မြန်မာစာသင်သား ရဟန်းတော်နှင့် သီတင်းသုံးဖော် မြန်မာစာသင်သား ရဟန်းတော် တပါးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ တွေ့ရတဲ့ မြ၀တီမင်းကြီးဦးစပန်းခြံ နဲ့ အာဇာနည်ကျောက်တိုင် (ဓာတ်ပုံ-ပြည်တော်မြင့်/ဧရာဝတီ)
ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီမြို့မှာ ၂၅ နှစ်ဝန်းကျင်အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ကျင်းပတော့မယ့် အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနားအတွက် ဒေသခံတွေက အရန်သင့်ဖြစ်နေကြပါပြီ။
ယိုယွင်းပျက်စီးနေတဲ့ မြ၀တီမင်းကြီးဦးစပန်းခြံဝင်းထဲက ဗိုလ်ချုပ်ကျောက်တိုင်ကွင်းကို ပြင်ဆင်ခဲ့တာအခုဆိုရင် ပြီးစီးသလောက်ဖြစ်နေပြီ၊
ဒီလ ၁၉ ရက်နေ့မှာကျရောက်မဲ့ ၆၆ ကြိမ်မြောက်အာဇာနည်နေ့ကို ဂုဏ်ပြုကျင်းပဘို့အတွက် မြ၀တီမြို့ခံတွေစု ပေါင်းထည့်ဝင်ငွေ ကျပ်သိန်း ၄၀၀ ကျော်နဲ့ ပြင်ဆင်ခဲ့တာလို့ ရပ်မိရပ်ဖတွေက ဧရာဝတီသတင်းဌာနကိုဒီနေ့ပြောဆိုကြပါတယ်။
သူတို့အဆိုအရ ကျောက်တိုင်နဲ့ပန်းခြံကိုပြုပြင်ရာမှာ ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရက တပြားတချပ်မှ ထည့်ဝင်တာမရှိဘဲ မြို့ခံတွေရဲ့အားပေးကူညီမှုနဲ့ မြ၀တီမြို့ စည်ပင်သာရေးအဖွဲ့က ဦးဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကျောက်တိုင်နဲ့ပန်းခြံကိုဦးဆောင်ပြင်ဆင်တဲ့ မြို့နယ်စည်ပင် ဆိုတာက မြို့ခံရပ်မိရပ်ဖအတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး အစိုးရရဲ့ စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနဲ့ သက်ဆိုင်မှု မရှိဘူးလို့ သိရပါတယ်။
အမှတ် ၁ ရပ်ကွက် ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမှာရှိတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကျောက်တိုင်နဲ့မြ၀တီမင်းကြီးဦးစပန်းခြံကို အရင်စစ် အစိုးရလက်ထက်က စီးပွားရေးသမားတဦးကို ရောင်းချခဲ့ရာကနေ ခြံဝင်းပိတ်ထားခြင်းခံခဲ့ရတာပါ။
ယခင်စစ်အစိုးရ လက်ထက်မြ၀တီမှာမွေးတဲ့ ကလေးငယ်တွေဟာ အာဇာနည်နေ့ဆိုတာ မသိတော့ဘဲ ဗိုလ်ချုပ်ဆိုတာ အရင်စစ်အစိုးရကို ဦးဆောင်သွားတဲ့လူလို့ ထင်နေကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း မြို့ခံတဦးကဆိုပါတယ်။
မြို့ခံစစ်ပြန်ကြီးတဦးကတော့”အာဇာနည်နေ့ပြန်လည်ကျင်းပခွင့်ရပေမဲ့ အရင်လိုဥသြဆွဲတဲ့အစီအစဉ်ရမရတော့ မသိရသေးဘူး ရတန်ကောင်းပါရဲ့ဗျာ။
ဒါမှကျွန်တော့မြေးလေးတွေကို အာဇာနည်နေ့ရဲ့အနှစ်သာရကဘာလဲ၊ ဘာဖြစ်လို့ဒီအခမ်းအနားကို လူတွေကျင်းပဂုဏ်ပြုချင်ရတာလဲ ဆိုတာ အဲဒီနေ့ကျရင်အချိန်အခါသမယနဲ့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကလေးတွေကို ရှင်းပြရမယ်” လို့ သူ့ဆန္ဒကိုပြောပါတယ်။
ကရင်ပြည်နယ်မှာ ၇ မြို့တဲ့ရှိတဲ့အထဲက အာဇာနည် ကျောက်တိုင်နဲ့ပန်းခြံကို မြို့ခံတွေရဲ့ ထည့်ဝင်ငွေနဲ့ အကြီးစားပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်ပြီး အာဇာနည်နေ့ ကျင်းပခွင့်ရဘို့ အာဏာပိုင်တွေဆီမှာ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ တောင်းဆိုရဲတာ မြ၀တီကလူတွေဘဲရှိတယ်ဆိုပြီး ဘားအံကအငြိမ်းစားကျောင်းဆရာတဦးက ဧရာဝတီသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။
လာမယ့် ဇူလိုင် ၁၉ ရက်နေ့မှာ ပြည်သူအများအပြား ရန်ကုန်မြို့ အာဇာနည် ဗိမ္မာန်ကို သွားရောက်ကြမှာပါ။
သို့သော်လည်း နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ကတော့ ဒီအခွင့်အရေး ရနိုင်မယ် မဟုတ်ပါဘူး။
ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ သမ္မတကြီးက အဲဒီအချိန်ဆို ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ ရောက်ရှိနေမှာ ဖြစ်လို့ပါပဲ။
အဲဒီနေ့မှာ ဦးသိန်းစိန်က ပြင်သစ် စစ်ဘုရင် နပိုလီယံရဲ့ အုတ်ဂူကို သွားရောက်မယ်လို့ သိရပါတယ်။
ယနေ့မနက် ၁၁နာရီခွဲခန့်က တေးသံရှင် အဆိုတော် ဆိုတေး တောင်သာမြို့သို့ ပွဲဆိုဖို့သွားစဉ် ကားဘီး ပေါက်ကာ ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ယာဉ်ပေါ်ပါ အမျိုးသမီးမှာ သေဆုံးသွားကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
ယာဉ်မောင်း သန်းဝင်လှိုင်မှာ သတိရလာပြီ ဖြစ်သော်လည်း တေးသံရှင်ဆိုတေးမှာ ယနေ့ညနေ ၄နာရီခွဲ အထိ သတိရခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရသည် ။
ခပ်ယဉ်ယဉ်ပြောရရင် လိင်လုပ်သား၊ ဒါမှမဟုတ် ပြည့်တန်ဆာတွေဟာ နိုင်ငံ အသီးသီးရဲ့ ကန့်လန့် ကာနောက် ကွယ်က အမှောင်ထဲမှာ ခေတ်အဆက်ဆက် ရှိခဲ့ကြမှာ ပါပဲ။ ဒီနိုင်ငံမှာလည်း မန္တလေး ရတနာပုံ မင်းနေပြည်တော်ကို ထူထောင်ခဲ့တဲ့ မင်းတုန်းမင်း တရားကြီး လက်ထက်ကတည်းက ပြည့်တန် ဆာ တွေရဲ့ ရပ်ကွက် ရှိခဲ့သလို မင်းတရားကြီး ကိုယ်တိုင်လည်း ပတ်သက်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ သုတေသီတချို့ရဲ့ စာပေ အထောက်အထား တချို့ကို တွေ့ရပါတယ်။
ဆိုလိုတာက အနေအစားချောင်လို့ ပြည့်တန်ဆာ ဘ၀ကို ခံယူသူက ရှိတော့ရှိပေမယ့် ဆင်းရဲလို့ဖြစ်ရတဲ့ သူလောက် အရေအတွက် မများပါဘူး။ ပြည့်တန်ဆာတွေ၊ အနှိပ်ခန်းတွေ၊ ကေတီဗီနဲ့ စင်တင်က မိန်းကေ လးတွေကို အေ့ဒ်စ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပညာပေးတာ၊ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးတာတွေ လုပ်ပေးနေတဲ့ အင်န်ဂျီအို အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က လုပ်သက်ရင့် ၀န်ထမ်းဖြစ်တဲ့ အိန်ဂျယ်လေး (နာမည်လွှဲ) ကတော့ ပြည့်တန်ဆာတွေ ကျက်စားတဲ့ နယ်ပယ်ကို လေးမျိုး လောက်ခွဲခြားနိုင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဒါက ဘန်းစကားနဲ့ 'ဘိ' လို့ခေါ်တဲ့ သတ်သတ်မှတ်မှတ် နေရာတစ်ခုမှာ 'ခေါင်း' တွေရဲ့ အောက်မှာရှိ သူတွေ၊ ဒုတိယက စင်တင်တချို့၊ နောက်ပြီး ဟိုတယ် တည်းခိုခန်းတွေမှာ စတည်းချ သူတွေနဲ့ အလွတ်လပ် ဆုံး လှုပ်ရှားနိုင်သူတွေက ကျုံးဘေးလို၊ လမ်းဘေးလို နေရာက ပြည့်တန်ဆာလို့ ဆိုပါတယ်။
"ရုပ်ရည်အရ ချို့ယွင်းချက် ရှိတဲ့သူတွေက 'ခေါင်း' အောက်မှာ လုပ်ကြရ တာများတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ လုံခြုံမှု အတွက်လည်း ခေါင်းတွေအောက်မှာ နေရင်း ဒီလိုခေါင်းပုံဖြတ်ခံပြီး လုပ်ကြ ရတာပဲ။ စီးပွားရေး လုပ်ဖို့ ဆိုတာလည်း အရင်းအနှီးရှိမှ ဖြစ်တာလေ၊ စားဖို့ တောင်မှ တပိန်ပိန် တလိမ်လိမ် ဘ၀မှာ အမေပေး တဲ့ လယ်တစ်ကွက်နဲ့ ဒီလိုပဲ လုပ်စားကြရတာ" လို့ အိန်ဂျယ်လေး က ပြောပါတယ်။
သူကိုယ်တိုင်က မိန်းမလျာ တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် တချို့ ပြည့်တန်ဆာတွေရဲ့ ဘ၀က သူတို့ ဘ၀ လောက်တောင် ကျေနပ်ပျော်ရွှင်စရာ မကောင်းဘူးလို့ ပြောပါသေးတယ်။ "ကျွန်တော် သူတို့ (ပြည့်တန် ဆာတွေ) ကွန်ဒုံး သုံးမသုံး၊ ခေါင်းတွေကို ခွင့်တောင်းပြီး ချောင်းကြည့် ဖူးတယ်။ ကွန်ဒုံး သုံးကြတယ်ဗျ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ကို ကြည့်ရတာ စိတ်ပျက်စရာပါ၊ မျက်လုံးတွေ ကြောင်တောင်တောင်နဲ့ လုံးဝကို အသက်မဲ့တဲ့ သူတွေလိုပါပဲ" လို့ သူက ပြောပါတယ်။ သူ့အပြောအရ လိင်ဆက်ဆံဖက်များတဲ့ ပြည့်တန်ဆာတွေဟာ သူ့ အန္တရာယ်ကို သူကြောက်လို့ ကွန်ဒုံး သုံးဖို့ကြိုးစားကြတာများ တယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
"ကျွန်မတို့ အဖွဲ့ စလှုပ်ရှားဖြစ်တာ ၂၀၀၂ ကပါ။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း မှာ ရောဂါဖြစ်ပွားနှုန်း ပိုမြင့်လာ တာမှာ ၂၀၁၀ မှာ အယောက် ၈၀၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ် မှာ အယောက် ၃၀၀ ကျော်အထိ တွေ့လာရပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်း အတာနဲ့ လုပ်နေတယ် ဆိုပေမယ့် မသိ သေးတာတွေ အများ ကြီးရှိနေဦး မှာပါ။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းသာ လုပ်နိုင်မယ် ဆိုရင် ဒီထက် အဆများစွာ များနေနိုင်ပါတယ်" လို့ ပြောပါတယ်။ ကွန်ဒုံးကို လက်ဝယ် တွေ့ ရင်၊ ဆောင်ထားရင် တရားရုံးရောက် ကြရလို့ ပြည့်တန်ဆာတွေဟာ ကွန်ဒုံးကို အန္တရာယ် တစ်ခုလို မြင်လာကြောင်းလည်း ပြောပါတယ်။ ကွန်ဒုံး သုံးသင့်တာ သိပေမယ့် ပြည့်တန် ဆာတွေမှာ တောင်းဆို ပိုင်ခွင့် ငြင်းဆန် ပိုင်ခွင့် မရှိတာတွေဟာလည်း ရောဂါဖြစ်နှုန်းကို မြင့်စေတာပါပဲ။ ဒီအနေ အထားမှာ သူတို့ရဲ့လုံခြုံမှုအတွက် တစ်ဖက်မှာ တရားဝင် လုပ်ကိုင်နိုင်မယ့် 'လိုင်စင်' ကို တချို့ပြည့် တန်ဆာတွေက လိုလား ကြတယ်လို့ ဆို ပါတယ်။
ပြည့်တန်ဆာတွေရဲ့ ဘ၀မှာ ကြားရတာတွေ ကလည်း စုံပါတယ်။ အသက် မပြည့်သေးတဲ့ သမီးကို နှစ်သိန်း၊ သုံးသိန်းရရင် ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ အမေ တွေရှိနေသလို ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း ကိုယ် တိုင်မြင်ဖူး ကြားဖူးခဲ့ ပါတယ်။ ပြည့်တန်ဆာလောကမှာ 'အသစ်' လို့ ထင်အောင် သွေးဆွတ်ထားတဲ့ ဂွမ်းကို သားအိမ်အစပ်ထိ ထိုးထည့်ပြီး အင်္ဂါဇာတ်ကို ကျောက်ချဉ်စိမ်တာမျိုး ခေတ်စား သလို 'အသစ်' ကြိုက်တဲ့ သူတွေ အညာမိနေတာလည်း ရှိကြောင်း အိန်ဂျယ်လေး ကပြောပြီး ဒါတွေဟာလည်း ကူးစက်ရောဂါနှုန်း များစေတဲ့ အချက်တွေထဲက တစ်ခုပါတဲ့။
ဗြိတိန်နှင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံများသို့ ချစ်ကြည်ရေးအလည်အပတ်ခရီး မသွားရောက်မီ တစ်ရက်အလို မြန်မာ သမ္မတက မြန်မာနိုင်ငံသည် လူမျိုးစုံ ဘာသာစုံ ပူးပေါင်းနေထိုင်သော အမျိုးသားကြင်အန် လက္ခာသစ် New National Identity ကို တည်ဆောက်နေချိန်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ပဋိပက္ခဖြစ်အောင် လှုံ့ဆော် မှုကြောင့် ကုလသမဂ္ဂကပင် မြန်မာပြည်ကို ဖိအားပေးနေခြင်းကို ရင်ဆိုင်နေရပြီဟု ဝန်ခံပြောဆိုခဲ့သည်။
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်း မိုင်တိုင် ၂၉၁/၃ တွင် မော်တော်ယာဉ် တိမ်းမှောက်ခဲ့သော တေးသံရှင် ဆိုတေးသည် မန္တလေးဆေးရုံကြီး တွင် ဆေးကုသမှု ခံယူနေပြီးသေဆုံးသည့် သတင်းမှာ မှန်ကန်ခြင်း မရှိကြောင်း ဆိုတေး၏ ဦးလေးဖြစ်သူက မန္တလေးဆေးရုံကြီးသို့ ရောက်ရှိနေသော The Voice သတင်းထောက်ကို ယနေ့ည ၁၀နာရီ ၁၀ မိနစ် တွင် အတည်ပြုပြော ကြားသည်။
သရုပ်ဆောင် ဘုဏ်းသိုက်နဲ့ အဆိုတော်ချမ်းချမ်းတို့ရဲ့ မင်္ဂလာဦးဆွမ်း
သရုပ်ဆောင်ဘုဏ်းသိုက်နဲ့ အဆိုတော်ချမ်းချမ်းတို့ရဲ့ မင်္ဂလာဦးဆွမ်းကျွေးအလှူကို ယနေ့ ဇူလိုင်လ၁၄ရက်နေ့ မနက် ၁၀နာရီက တောင်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ပဋိကတ်သုံးပုံနိကာယ်စာသင်တိုက် တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သံဃာတော် အပါး ၄၀၀ကျော်ကို ဆွမ်းဆက်ကပ်ခဲ့ပြီး သင်္ဃန်းများလည်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေများနှင့်ဆွေမျိုးသားချင်းများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဘုဏ်းသိုက်နဲ့ ချမ်းချမ်းတို့ က ဇူလိုင်လ ၁၇ရက်နေ့ညနေ ၅နာရီမှာတော့ စိန့်မေရီချက်စ်ကျောင်းမှာ မင်္ဂလာပွဲပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ခိုင်ဝေလွင် ဓာတ်ပုံအောင်ဇော်မင်း